ကိုမိုးသီးဇွန်နှင့် Messenger News Journal တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ကောက်နှုတ်ချက်အချို့
[PANAS] Adun Kuala Perlis Cedera Ditumbuk Lelaki Kerana Isu Pasar
BE CAREFUL:THERE IS NO WORSHIPING PLACE for Christians and Muslims at 13th. SEA Games in Myanmar
ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုင်ရာ ထင်ပေါ်လာသော လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ စစ်နည်းစစ်ဟန်
[BERGAMBAR] Bas Jelajah Merdeka Diserang Lagi, Kali Ini Di Jasin Melaka
Selepas Pahang, Ada Penduduk Negeri TPM (Johor) Pula Masih Guna Air Perigi
[BERGAMBAR] Kaum Cina & India Enggan Ditipu UMNO BN Lagi
Mitt Romney Humour
Posted: 08 Sep 2012 10:02 AM PDT
Posted: 08 Sep 2012 07:03 AM PDT
SOURCE: ကိုမိုးသီးဇွန်နှင့် Messenger News Journal တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ကောက်နှုတ်ချက်အချို့
ကျွန်တော်တို့က တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးချင်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြင်တဲ့အမြင်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို တင်ပြပေးမယ်။ အခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်ပြီး ပြောင်းလဲနေတယ်၊ သူ့ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ကျွန်တော်တို့က အယုံအကြည်ရှိတယ်။ သူ့ကို ကူညီဖို့ အင်တာနေရှင်နယ်ကို မေတ္တာရပ်ခံ ပေးချင်တယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်ပါ။ သူ့အတွက်ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မဟုတ်ဘူး။ သူဦးဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲမှာ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ စည်းလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ့အတွက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးက အရမ်းကျဆင်းနေပြီ။ သူကလည်း ပြောင်းလဲနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခက်အခဲ တွေ အများကြီးရှိတာပေါ့။ မြေတွေ သိမ်းခံနေရတာ လည်း ကြားတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတာ တွေလည်း ရှိတယ်၊ အရင် အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို သူ့အနေနဲ့ ခေါင်းခံနေရတယ်၊ ချာလပတ်ရမ်းနေတာကို ကျွန်တော်တို့ နားလည် ရမှာပေါ့။
ကျွန်တော်ကလည်း ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက် ပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့DNA ကို စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှမ်း လည်းပါမယ်၊ မွန်လည်း ပါမယ်၊ ဗမာလည်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာ တွေဟာ နတ်ကိုးကွယ်မှုက ရှိတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်မှု ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရိုးရာ ပါ။ ကျွန်တော် မိဘတွေက နတ်ကန်တော့တဲ့ အချိန်ဆိုရင် အဘိုးက ရှမ်းနတ်ကို ကန်တော့ရတယ်။ ရှမ်းခေါင်းပေါင်းတွေနဲ့ အဘိုးက သုံးခွဘက်ကပါ။ ရှမ်းသွေးလည်း ပါမယ်။ အမေ့ဘက်ကကျတော့ ကညွတ်တို့ ငါးရံ့နားဖားထိုးလို့ ခေါ်တာပေါ့။ မွန်ပေါ့ကွာ။ အဖေဘက်ကျတော့ ဦးမင်းကျော်တို့ပေါ့။ မြင်းဖြူရှင်လည်း ကိုးကွယ်ရတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘုတ်ပလက်ထဲမှာ ပါတယ်လို့ သဘောပေါ့။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တယ်။ ဗမာလည်း ဖြစ်တယ်။ ကရင် မွန်လည်း ဖြစ်မယ်ပေါ့။ ရခိုင်ရဲ့ အဓိကပြဿနာကို ကော်မရှင်ဖွဲ့ထားတယ်။ ဒီကော်မရှင်ကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒီကော်မ ရှင်က မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်မယ်၊ ဘက်မလိုက်ဘဲ တရားဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ရပ်တည်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အရဆိုရင် ဗမ ပြည်ကြီးမှာ မတူခြား နားတဲ့ ဘာသာတွေ၊ မတူခြားနားတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ အတူယှဉ်တွဲပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေတာက ကျွန်တော့် ရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပေါ့။ ကရင်လူမျိုးကော ဗမာကော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကော၊ အစ္စလာမ်ကော၊ ခရစ်ယာန်ကော အားလုံး အတူတကွ နေထိုင်သွားတာကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြေတစ်ခုပါပဲ။
ကိုမိုးသီးဇွန် (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၁၉၈၈)
တစ်ခါ တစ်ဖက်မှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ လည်းပြောတယ်။ ဘင်္ဂါလီလို့လည်းပြောတယ်။ မွတ်စလင်လို့လည်း ပြောတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဘာသာရေး ဆန့်ကျင်တဲ့အထိ ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့က လူမျိုး ဖြစ်သင့်သလား၊ မဖြစ်သင့်ဘူးလား ဆိုတာ နိုင်ငံရေး သမားတွေက ခံစား ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ပါတီကမှ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။ လူတစ်ယောက်က လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်သင့်တယ်၊ မဖြစ် သင့်ဘူးဆိုတာ ဘယ်ပါတီကမှ မဆုံးဖြတ်ရဘူး။ Right လွှတ်တော်ကပဲ ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ Right ကျွန်တော်ကပဲ ထောက်ခံခံ၊ မထောက်ခံခံ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ တရား လည်းမဝင်ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာက သူ့ဘာသာသူ Claim လုပ်တယ်။ သူဘာသာသူ Claim လုပ်တာပဲဖြစ်မယ်။ ကိုယ်လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်တာ ရှိတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒါကို ဘာလို့ဆဲနေကြတာလဲ။ ဒီမိုကရေစီ ကိုယုံကြည်ရင် ဘယ်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရမှာပဲ။ အခုလူတွေတော်တော် များများက ရိုဟင်ဂျာပဲဖြစ်ဖြစ် မူစလင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကဘယ်သူ့ကို အကျယ်ဆုံးဆဲသလဲ။ ဒါကတစ်ကယ်အဖြေမှ မဟုတ်တာ အဓိကအဖြေက တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ တစ်ကယ့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိဖို့ပဲ။ ဒီလို ဖြစ်လာရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဘာသာရေး Conflict တွေ၊ လူမျိုးစု Conflict တွေ အများကြီး ကြုံရတယ်။ အသက် ၅ နှစ်ကျော် ကျောင်းစတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ တရုတ်-ဗမာအဓိကရုဏ်းလည်း ဖြစ်တယ်။ တချို့တရုတ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေက ကယ်လိုက်တာမျိုး ရှိတယ်။ အခု အမေ့အိမ်သွားလည်ရင်းနဲ့ အဲဒီဦးတရုတ်ကိုလည်း တွေ့ချင်တယ်။ တရုတ်ဗမာအဓိ ကရုဏ်းတုန်းက အမေတို့က အိမ်ဘေးနားက တရုတ်မကြီး မနှင်းဆီကို ကယ်လိုက်တာပါ။ သူက သွေးနုသားနုကြီးနဲ့ပေါ့။ ဗမာတွေက ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာ။ ကျွန်တော့် မိဘ တွေက သိမ်ကြီးဈေးမှာ ဆိုင်ထွက် နေကြတာ။ ၂၇ လမ်းဝရန်တာကနေ ဟိုဘက်အုပ်ကြီး၊ ဒီဘက်အုပ်ကြီး ရိုက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဟာကြီးကို အဲဒီ အရွယ်ကတည်းက အမှန်တရားလို့ မယူဆ ခဲ့ပါဘူး။ ၈၈ ကြီး ဖြစ်လာတော့ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး လမ်း ကြောင်းကို ဦးနေဝင်းက ဦးတည်ပေးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီအချိန်မှာ တာဝန်ရှိလာသူဖြစ်လာပြီ။ ကိုဇော်မင်းတို့လည်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗကသက Statement ထုတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မူဆလင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ နီးစပ်ရာ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်ထိန်းယူတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆက်တောင်းတယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်ချက်ပဲ။
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကို ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ နယူး ယောက်စ်က ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်။ သူပြောတာလေး ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းက စပါးစိုက်နေကြတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှစိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ စပါးစိုက်တာ ဘာထူး ဆန်းလို့လဲ။ ဝါဒဖြန့်တာ များနေတယ်။ မစလ ခေတ်က စပါးစိုက်တာကို ဒါကို မြစိမ်းရောင်စစ်ဆင်ရေးတဲ့၊ နွေရာသီ စပါးစိုက်တော့လည်း ရွှေဝါရောင် စစ်ဆင်ရေး ဆိုပြီး ရိတ်ကြတယ်။ ဟိုဘက်က ခိုးဝင်လာတဲ့ ကာလ က ရှိလာတော့ ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးဆိုပြီး လုပ်ပြန်ရော။ တကယ်က ခိုးဝင်လာရင် ဖမ်းရမှာပဲလေ။ Immigration အရ ရိုဟင်ဂျာမှ မဟုတ်ဘူး၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန် အကုန်လုံး ခိုးဝင်လာရင် ဖမ်းရမှာပဲ။ အခု ထိုင်းထဲကိုသွားရင်လည်း ထိုင်းက ခိုးဝင်လာရင် ဖမ်း မှာပဲ။ အမေရိကန်လည်း မက္ကဆီကိုတွေကို ဖမ်းပြီး ပြန်ပို့တာပဲ။ အမေရိကန်တွေဆို ဖမ်းတာ နည်းတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ပြန်ပို့တယ်။ အပေါ်ကနေ ဖိထားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါကို တွေ့နေရတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘာမှ မပြောကြဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ Soveriegnty မှာ တရား ဥပဒေလုပ်ရတယ်။ သူ့နိုင်ငံထဲ မတရား ခိုးဝင်လာရင် လုပ်ရမှာပဲ။ အဲ့လို မလုပ်ဘဲနဲ့ အမျိုးသား ရေးလို သွားလုပ်တာ ဒီအကျိုးဆက်က သိပ်ကြီးတယ်။ ဒီလို ခိုးဝင်လာရင် လူရှစ်သိန်းလုံး ဖမ်းပြီး ပြန်ပြီး မောင်း ထုတ်လို့ရတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးပုံစံနဲ့ အမျိုးသားရေး ပုံစံဆိုရင် တစ်ယောက်မျှ မောင်းထုတ်လို့ မရဘူး။ ဒါကို အစိုးရက သိဖို့လိုတယ်။ Smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ကို သွားထိရင် ဒုက္ခရောက်လာမယ်။ ရပ်ပေးခဲ့တယ်၊ ပြောခဲ့တယ်၊ နားမထောင်ကြဘူး၊ အခုတော့ ပုံမှန် Right ထဲကို ပြန်လာရတယ်။ ဒေါ်စု လည်း ပြောလို့ မရဘူး။ ဒါကို 'ဆဲ'နေကြတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ ဟာတွေပဲ။ သူက တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ အနေအထားကို မြင်နေတာပဲ။ မီဒီယာကိုလည်း အားကိုးပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေကို လည်း မှန်မှန် ကန်ကန် အားကိုးပါတယ်။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ တင်စား ထားတာ ဒီမဏ္ဍိုင်ကကို Virus ဖြစ်နေတယ်ကွာ။ ကျွန်တော်လည်း အများကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါ ဘယ်သူ့ ကို သွားအားကိုးမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာတွေ မရှိတုန်းက ပထမဆုံး သတင်းစာလေး သွားထုတ်ခဲ့တယ်။ မီးချောင်းလေးနဲ့ ဖောက်ပြီး သွားလုပ်ခဲ့တာ။ အာရုဏ်ဦး သတင်းစာလေးပေါ့။ သတင်းစာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာပြီး လွတ်လပ်လာပြီ ဆိုတော့မှ အခြားလူမျိုး တစ်မျိုးကို သတ်ဖြတ်ဖို့က Ethically က လက်မခံ နိုင်တာ။ မဲမပေးရင်နေ၊ မထောက်ခံရင်နေ၊ ခေါင်းဆောင် မဖြစ်ရင်နေ၊ ဒါ ကျင့်ဝတ်အရကို ကမ္ဘာကြီးက လက်ခံ မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော် ပြောပါရစေ။
ကိုမိုးဟိန်း၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုမိုးသီးဇွန်
ကမ္ဘာ ကြီးမှာ ဗမာတစ်စုတည်း နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။ ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တော့ ဆရာတော်ကြီး စိတ်ညစ်တယ်။ နယူးယောက်စ်ကို ကြလာတုန်းက ကျွန်တော် ဆွမ်းကပ် တယ်။ "မိုးသီးရေ မင်းတို့ဗမာတွေပဲ ရုပ်နဲ့နာမ် ရှိတာ မဟုတ်ဘူးကွ၊ ဘုရားဟောထားတဲ့ လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်းအတွက် ဖြစ်တယ်"လို့ သူပြောတဲ့ စကား လေးတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ရခိုင်က ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကို ပြန်ချုပ်ရရင် Empowerment မရှိလို့ဘဲ။ ကျွန်တော် ရခိုင် လူမျိုးတွေအတွက် တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ခွကျတယ်။ ကနေဒါရောက်တော့ မွန်တွေနဲ့လည်း တွေ့တယ်။ သူတို့ ဘာတွေ ဆုံးရှုံးနေတာလဲဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုချင် တာလဲတောင် မသိကြဘူး။ ဘာလိုချင်တာလဲလို့တောင် မသိကြဘူး။ ရခိုင်ကို ရခိုင်ပဲ အုပ်ချုပ်စေချင်တာ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကြားချင်နေတာက ရိုဟင်ဂျာကို ကျယ်ကျယ်ဆဲတာ ကြားချင်နေတာ။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် တို့ မဆဲနိုင်ဘူး။ ထောက်ခံရင် ထောက်ခံ မထောက်ခံရင် နေ။ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပြောမယ့်ဟာက ရခိုင်ပြည်သူတွေ ကို ရခိုင်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးပါလို့ ဒီအစိုးရကို ပြောတဲ့ ခေါင်းဆောင်က ကျွန်တော် တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဘယ်သူမှ ဒီစကား မပြော ရဲဘူး။ ကရင်ပြည်နယ်ကို ကရင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးပါလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲ ပြောရဲသေးတယ်။ သမိုင်း တစ်လျှောက်လုံး ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှင်းမယ်ထင်တယ်။
ဒီ Issiue ကို Awareness အဖြစ်ဆုံးက မီဒီယာ ရယ် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ Confuse ဖြစ်နေတယ်။ ကင်တာနား Message ကို Confuse ဖြစ်နေတာ။ အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်တာလား မသိဘူး။ ပြိုဆင်းလာ ရင် တံတိုင်းခတ်ရမယ်။ လက်ရှိတံတိုင်းက သေးတယ်။ ထပ်ခတ်ရမယ်။ ကျွန်တော် သမ္မတဖြစ်ရင်လည်း တံတိုင်းခတ်မှာပဲ။ တရုတ်ပြည်ဘက်လည်း ခတ်ရမယ်။ ဒါက အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဖြစ်နေတယ်။ အထဲရောက်ပြီး သား မျိုးဆက် သုံးလေးငါးဆက်ဆိုရင် နိုင်ငံသား ပေးရမယ်။ သူ ဆိုလိုတာက အထဲရောက်ပြီးသား နိုင်ငံ သား သုံးလေးငါးဆက်ဆိုရင် မျိုးဆက် ပေးကို ပေးရ မယ်။ အဲဒီလိုမှ မပေးရင် မြန်မာအစိုးရ ပြဿနာ တက်မယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေလည်း ထပ် ပြဿနာ တက်မယ်။ ကျွန်တော် က ကမ္ဘာကို ပတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ သူအနေနဲ့ အကြံပေး တာ။
ဒီကို အကြာကြီးပဲ ရောက်နေတဲ့ တရုတ်တွေရှိ တယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဦးတရုတ်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ သမီးဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကြောင့် ကရင်သူပုန်တစ် ယောက်က တရုတ်ကြီးဆီ ပေးခဲ့တာ။ အမှန်တော့ သူက ကရင် လူမျိုး၊ အသားကလည်း ဖြူတယ်။ တရုတ်ကြီး ကလည်း မွေးစားထားတော့ တရုတ်ဖြစ်နေတာ။ အခု ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက အခုအထိ နိုင်ငံသား မဟုတ် သေးဘူး။ FRC ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို လက်ခံမလား။ သူက နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်သင့်လား မဖြစ်သင့်ဘူးလား။ Immigration Law 1982 နဲ့အညီ ပေးလိုက်ပါ။ အခုက မကျင့်သုံးလို့ ပြဿနာ ဖြစ်နေတာ။ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး ဆိုရင် ပြန်မောင်းထုတ်ရမှာပေါ့။ အခု ကျွန်တော်လည်း ဗမာနိုင်ငံသား အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖြစ်နေပြီ။ ဒီဥပဒေနဲ့ မကိုက်ရင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်မောင်း ထုတ်ရမယ်။ အခု ကျွန်တော်ဟာ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဗမာနိုင်ငံသား၊ ဗမာပြည်သူ တွေအတွက် တိုက်လာတာ။ ကျွန်တော့်မှာ အခု ဒီအခွင့်အရေး မရှိတော့ဘူး။ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှင်းမယ် ထင်တယ်။
အမေရိကန်လည်း Policy မျိုးစုံနဲ့ နာမည်ပျက်လိုက် ကောင်းလိုက်နဲ့ နေလာတယ်။ အမေရိကန်သုံးနေတဲ့ ရေနံ ရဲ့ (၆၄)ရာခိုင်နှုန်းက အရှေ့အလယ်ပိုင်းက သွင်းနေတာ။ သူက အဲဒီနေရာကို အလွတ်မခံနိုင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကိစ္စမှာ Model Issue လိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ပါးစပ်နဲ့ဘဲ ထောက်ခံသလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလိုအနေ အထားပဲ။ အခု အဲလိုအနေအထားက မပိုသေးပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကို အကျိုးစီးပွားအတွက် သူက စိတ်မဝင် စားသေးပါဘူး။ အချို့လည်း သုံးသပ်နေကြတယ်။ တရုတ်ရဲ့ Power ဘယ်လိုဆိုလဲ သုံးသပ်ကြတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာ ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်မှာ တင်ထားတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အမေရိကန်က မဟာ ဗျူဟာကျကျ စိတ်မဝင်စားသေးဘူး။ စိတ်ဝင်စားရင် လစ်ဗျားကို အမေရိကန် ဘယ်လို ဝင်သွားလဲ။ Model Issue ဖြစ်နေလို့ ကြည့်နေတာ။ ဒီဒေသကို အချိန်မရွေး ဝင်လာလို့ ရတယ်။ သူဝင်လာရင် ဘယ်သူမှ မတား ရဲဘူး။ ကြည့်နေတဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး စောင့်နေတာ။ သူဝင်လာရင် တရုတ်က မကန့်ကွက် ရဲဘူး။ သူဝင်လာရင် Share ပြီးစားမှာ။
ကမ္ဘာကြီး သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက Multi-culture သွားနေတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ လူမျိုးစုတွေ မတူကွဲ ပြားတဲ့ ဘာသာတရားတွေ ရှိတယ်။ တစ်ယောက်တည်း သွားလို့ မရတော့ဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ မူဆလင်၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် အဲ့လိုပြဿနာတွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံသား တစ်ခုတည်း ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူး။ ရှေ့လျှောက် ပိုခက်လာပြီ။ အချို့က ကမ္ဘာကြီးက ရွာလေးတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီး ဥပမာ ကျွန်တော့်ရဲ့Identity တွေကလည်း Multi-identity ဖြစ်လာပြီ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်၊ ပါတီခေါင်းဆောင်၊ သူပုန်၊ တောထဲမှာ တိုက်လာတယ်။ အမေရိကန် ရောက်သွားတယ်။ အမေ ရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာတယ်။ စသဖြင့် Identity တွေ ပြောင်းလာတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာလူမျိုး အချို့ဆိုလည်း ကနေဒါနိုင်ငံသား ဖြစ်လာတယ်။ ထိုင်း စင်္ကာပူတို့လည်း များလာပြီ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ဂျပန် နိုင်ငံသား တစ်ခုတည်းနဲ့ ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူး။ ပညာတစ်ဘာသာတည်းနဲ့ ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူး။ အခု မြန်မာနိုင်ငံသား အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လည်း Local ကို သူပြန်လာမယ်လုပ်မယ်၊ Co-operation တွေလည်း စီးပွားရေးအရ တက်လာတော့မယ်။ ဒါဆိုရင် ထိုင်းတွေက အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ မြန်မာဒုက္ခသည် ငါးသန်းကို လက်ခံထားတယ်။ တို့က ရိုဟင်ဂျာ ရှစ် သိန်းကို Allergy ဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကို ပျောက်တော့မလိုလိုပေါ့ကွာ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေက နိုင်ငံရေးအခြေအနေတောင် မသိကြဘူး။ မသိတာကလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မသိချင်တာ တွေလေ။ အနာဂတ်ကို ဒီအတိုင်းသွားရင် Financial ကလည်း အရမ်းအားနည်းတယ်။ Micro economics မှာလည်း Stable မရှိဘူး။ Banking system ကလည်း ဂျမ့်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေက လုံးဝကို Zero ဖြစ်သွားပြီ။ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ တစ်ခုက မြေကြီး၊ တစ်ခုက Education လည်းမရှိဘူး။ မြေကြီးနဲ့ လုပ်ဖို့က ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲမှာ ဘာမျှ မရှိဘူး။ နောက် ငါးနှစ် ဆယ်နှစ် ဗမာရဲ့ အနာဂတ်က မသေချာ ဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ Energy မရှိဘူး။ သူတို့သုံးနေတဲ့ Energy က Diesel နဲ့မောင်းနေတာ။ စက်ရုံကြီးတစ်ရုံ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လျှပ်စစ်မဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်လို့ အလုပ်သမား နှစ်သောင်း သုံးသောင်းနဲ့ စက်ရုံကြီး တည်ဆောက်ရင် ဒီရပ်ကွက်က လူထုက ပြန်မှောင် သွားမှာပဲ။ အရင်ကလို ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆန္ဒပြန် ပြရမှာပဲ။ ဒီဘက်ကို ပေးရတော့ ဟိုဘက်ကို မလုပ် နိုင်ဘူး။ သေးသေးလေးတွေပဲ လုပ်နိုင်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးသိန်းစိန်၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ တည့်ဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့ ၈၈ အားလုံး တက်ရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Exclusive လုပ် လို့မရဘူး။ အဲ့ဒါတွေ အားလုံးက နောက်ထပ် အုံကြွဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မဟာဗျူဟာကတော့ ဦးသိန်းစိန်ကို အကူအညီပေးဖို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူငယ်တွေ အလုပ်တွေရဖို့၊ လူငယ်တွေ Stable ဖြစ်ဖို့၊ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ဖို့ လာခဲ့တာ။
Posted: 08 Sep 2012 08:34 AM PDT
Kangar - Gara-gara tidak puas hati dengan isu pasar, seorang lelaki yang ada rekod ditahan polis, menumbuk Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Kuala Perlis, Mat Hassan (gambar) di Kampung Seberang Tok Pi, Kuala Perlis, pagi tadi.
Sementara itu, Mat Hassan ketika dihubungi berkata, beliau tidak mahu membesar-besarkan kes tersebut, sebaliknya menyerahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. -SH
Posted: 08 Sep 2012 06:22 AM PDT
Seremban: Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan negara mengamalkan dua undang-undang yang berbeza ketikamengulas tindakan pantas pihak berkuasa ke atas individu-individu yang memijak gambar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
"Malaysia mengamalkan konsep '1 Malaysia2undang-undang'," katanya pada majlis ceramah 'Jelajah Merdeka Rakyat' di Rantau dekat sini malam tadi.
Tegas beliau, "saya tidak setuju tindakan anak muda yang memijak gambar Najib. Tapi kalau orang lain kencing gambar Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat, tak apa? Tunjuk punggung kepada Pengerusi Bersih, Dato' S Ambiga tak apa?
"Baling batu di ceramah saya dan Nurul Izzah (Ahli Parlimen Lembah Pantai) di Lembah Pantai. Pecah cermin kereta saya….pasal apa?
Apa jenis manusia macam ini? Kamu ingat kamu orang besar hukum lain?," soal Ketua Umum PKR itu.
"Hukum ini tidak kenal pangkat. Ini 1 Malaysia! 1 Malaysia apa? Satu undang-undang untuk orang kaya, satu undang-undang untuk orang miskin.
"Satu undang-undang untuk menteri Umno, rasuah pun tidak apa, tutup semua. Satu undang-undang untuk orang dibawah. Polis ambil 100 ringgit, 'charge',' katanya.
"Seperti saya kata rasuah 200 ringgit polis, tangkap! Rasuah setengah bilion ringgit kapal selam, lepas!
"Orang kecil dan miskin namanya 'corruption' (rasuah). Orang besar curi namanya 'komisyen'. Komisyen halal. 'Corruption' haram.
"Pemimpin yang tidak sanggup laksanakan ilmu 'rule of law' tetapi ikut 'law of the jungle' mesti diturunkan ke bawah dan ditumbangkan", kata Anwar.
Anwar juga berkata perangai pemimpin Umno ibarat 'baling batu sembunyi tangan' dan seterusnya rakaman video perbahasan di parlimen ditayangkan kepada orang ramai.
Beliau menegaskan, "mereka menfitnah saya memiliki RM3 bilion, ketika saya berbahas di parlimen ada di antara mereka menjerit tiga bilion!
"Saya beri laluan kepada mereka untuk berbahas atas tuduhan itu, tetapi mereka tidak berani dan tidak mahu berbahas.
"Itulah cara mereka menyebarkan fitnah. Bila kita cabar dia bangun dan dia tidak berani bangun. Inilah satu contoh gambaran yang berlaku di parlimen.
"Ketika saya menjadi Menteri Kewangan dari tahun 1993 hingga 1997, negara tidak menambah hutang, kita hanya bayar hutang lama.
"1997 sampai sekarang kita berhutang. Rekod hutang negara paling banyak ialah di bawah Najib. Ada cerita isu ini di dalam Utusan Malaysia, tidak ada! Ada cerita di dalam TV3? Tidak ada! Ada cerita di dalam RTM? Tidak ada!," ujar Anwar.
Posted: 08 Sep 2012 05:26 AM PDT
Pic source:FB of Khalid Walid
Posted: 08 Sep 2012 04:45 AM PDT
I received this from someone who thinks I ama'keeper,' so I've uploaded it to the people I think of in the same way... Now it's your turn to show this to those people that are 'keepers' in your life.
Posted: 08 Sep 2012 03:37 AM PDT
SOURCE: ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုင်ရာ ထင်ပေါ်လာသော လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ စစ်နည်းစစ်ဟန် မူရင်းဆောင်းပါး – Popular 'Buddhist' racism and the generals' militarism By ဒေါက်တာမောင်ဇာနည်
ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ဆန့်ကျင်နေသူတွေနဲ့ ပြည်သူများဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့မွေးရပ်မြေ မန္တလေးမှာ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော် လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် အမြစ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ မန္တလေးသားကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလိုပြုလုပ်ကြတာကို တုန်လှုပ်ဖွယ်တစ်ခုအဖြစ်သာ မြင်ပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ စစ်ဘက်ကလူတွေလုပ်သလို "အမျိုးသားလုံခြုံရေး"၊ "နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ရေး" စတာတွေကို ကြော်ညာနေကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိရေးပုံစံကို ဆန့်ကျင်ပြီး သွေးချင်းတူမှ နိုင်ငံသားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စံပုံစံမျိုးရှိတဲ့ မှားယွင်းနေတဲ့သမိုင်းအမြင်ကို ကျင့်သုံးနေကြတာပါ။
အဖိနှိပ်ခံ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးကြတော့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဖြစ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘယ်များရောက်သွားပါလိမ့် ?
၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက အသိရှိတဲ့လူသားတွေအတွက် ချစ်ခြင်းတရားကို လက်ကိုင်ပြုပြီး ရန်ကုန်ကလမ်းတွေပေါ်သာမက အခြားမြို့တွေမှာပါ ရေလှိုင်းကြီးများပမာထွက်လာကြတဲ့ ဂုံဂမာန်အရောင် သင်္ကန်းဝတ်ရဟန်းတွေဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို အံတုခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအပြုအမူကြီးရဲ့ နာရီချိန်သီးက ထုတ်ပေးနေတဲ့အသံကတော့ အချီးအနှီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကြားလိုက်ကြရပါပြီ။ အဲဒီရဟန်းတွေကပဲ အခုအခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့ ဂါထာမန္တယားတွေနဲ့ အထူးသီးသန့် နိုင်ငံသားအဖြစ်ရှိနေရေးကို တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ အကယ်၍ လူအုပ်စုကြီးဟာ အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ နိုင်ငံသားအရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါဟာ နာဇီဝါဒဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုပါ။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတဲ့ အာရကန်(ရခိုင်) ပြည်နယ်တွင်းက မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးအနွယ်တစ်ခုလုံး ရှင်းလင်းသုတ်သင်ခံရမှုကတော့ မြန်မာပြည်က ဒီမိုကရေစီ အရေး ကမ္ဘာ့နှင့်အ၀ှမ်းက ထောက်ခံကြသူတွေကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေပါတယ်။ ပြဿနာတွေပြည့်နေတဲ့မြေမှာတော့ ရခိုင်ပြည်က နောက်ဆုံးပေါ် လူသတ်ကွင်းပါပဲ။ ကျူးလွန်ကြသူတွေရော၊ ဒုက္ခသည်တွေကိုပါ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ အသတ်ခံ၊ မုဒိန်းကျင့်ခံ၊ အဖမ်းဆီးခံ၊ ဥပဒေမဲ့အပြုကျင့်ခံ ဒါမှမဟုတ် နေထိုင်ရာနေရာ ကနေ မောင်းထုတ်ခံရတဲ့ ကလေးများနဲ့ အမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်နေတဲ့ ရာပေါင်းများစွာသော ရိုဟင်ဂျာများကို တွေ့ရမှာပါ။
ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်တတ်တဲ့ ထုံးစံအတိုင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့ ဇွန်လအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းက ပဋိပက္ခ (ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ) ရယ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအကြားက ခံစားရတဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှုခြင်းကို ယှဉ်ပြီးသုံးသပ်ရင်၊ အစိုးရက သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေကို အသုံးချပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအစီရင်ခံစာမှာတော့ အပြစ်တင်ဖွယ် ကွဲပြားသောပုံရိပ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ လှစ်ဟပြနေပါတယ်။ အစီရင်ခံစာကတော့ ပြတ်သားလှပါတယ်။ "မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်သားတွေက ရခိုင်တွေကိုရော၊ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပါ အကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဦးတည်ပြီး သတ်တယ်၊ မုဒိန်းကျင့်တယ်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တယ်" လို့ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ သစ်လွင်သော တော်လှန်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်နေမှုတွေအတွက်တော့ ဒီပုံရိပ်ကြီး မသင့်လျော်တာ အမှန်အကန်ပါပဲ။ နိုင်ငံတကာက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်လဲဖြစ်လာရော သမ္မတအကြံပေးဆိုသူက သူတို့အစိုးရအနေနဲ့ ပဋိပက္ခကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျင်မြန်စွာ ထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတော့ အမှန်တရားအတွက် အဲဒီစကားနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဆိုပါတယ် _____ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီး ပိတ်ဆို့ အရေးယူတာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာအရေအတွက် ၁ သိန်းကျော်ထဲက အများစုကြီးကတော့ နေစရာပျောက်သွားကြတယ်၊ သေရေးရှင်ရေးတမျှအစာရေစာခေါင်းပါးနေ တယ်၊ နေစရာ နေရာနဲ့ ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ် (လို့ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြပါတယ်။)
အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရကလည်း မြန်မာပြည်ဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို စားရေရိက္ခာထောက်ပံ့မှုရပ်တန့်ဖို့ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တွေကို ပြောလိုက်တာကြောင့် အခြေအနေကို ပိုပြီးဆိုးဝါးသွားစေပါတယ်။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဆူဆူပူပူနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အရေးပေါ်စားရေရိက္ခာအထောက်အပံ့နဲ့ ဆေးဝါးတွေဟာ အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဆက်လက်မထောက်ပံ့ဖို့ ပြောတဲ့ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေပါပဲ။ ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေကတော့ဗျာ – "ဒီ တိရစ္ဆာန် (ရိုဟင်ဂျာများကို ရည်ညွှန်း) တွေကို အစာမကျွေးရဘူး၊ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာလည်း နေထိုင်ဖို့ ခွင့်မပြုရဘူး" အဲလိုသဘောမျိုးရှိကြတာပါ။
အစိုးရက သူ့ရဲ့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအနွယ်ဝင် မြန်မာပြည်သားတွေကို လူမျိုးဇတ်ခွဲခြားဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အလွယ်တကူပစ်မှတ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းတော့တာပါပဲ။ လူထုကြီးရဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အဆိပ်ရည်က ယိုစိမ့်ထွက်လာတော့တာပါပဲ။ တခြားကမ္ဘာအတွက်တော့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ သဘောသဘာဝကို ခဏလေးစောင့်ကြည့်ဖို့ သင့်နေပါပြီ။ "ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး" ရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ ခါးသီးလှတဲ့အမှန်တရားတွေ နစ်မြုပ်နေပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရက သူတို့အခုရနေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေထဲက ပါဝါတွေ၊ ပါလီမန်ထဲက ပါဝါတွေ၊ တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်အပေါ်မှာ ခြယ်လှယ်နိုင်တဲ့ ပါဝါတွေကိုသာမက အဆီးအတားမရှိ ခြယ်လှယ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေအပေါ်မှာပါ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီအစိုးရက ကိုယ်ကျိုးအတွက် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေများပိုင် လက်နက်တိုက်ကြီးတွေကို စုစည်းပြီးတော့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများရဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုသာမက အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး တွေကိုပါ ငြင်းဆန်ပယ်ချနေပါတော့တယ်။ ဖက်ဆစ်စနစ်နဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေက သူတို့ရဲ့ ခေတ်သစ်အိမ်ဖော် နိုင်ငံရေးမူဝါဒ (ပြည်သူများကို အိမ်ဖော်အခိုင်းစေများသဖွယ် ထင်မြင်နေသည့် နိုင်ငံရေးမူဝါဒ) ကို ကျေနပ်တင်းတိမ်နေကြပါတော့တယ်။
ဒီတော့ကား လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ညှင်းပမ်းရေးကနေ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူကြီးများနဲ့ တိုင်းပြည်အခွင့်အာဏာရဲ့ သဘောသဘာဝတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေများ ပြောပြနေပါသလဲ (ဆန်းစစ်ဖွယ်) ?
အလှည့်အပြောင်းအနေနဲ့ ဒီအုပ်ချုပ်ပုံကနေ စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးပိုင်းဆိုင်ရာ စုစည်းမှုနဲ့ ကျယ်ပြောပျံ့နှံ့မှုများနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ လူမှုနေထိုင်ရေးအဆင့်အတန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း ဘာတွေများ ပြောပြနေပါသလဲ ?
နိုင်ငံရေးမူဝါဒများနဲ့ တိုင်းရင်းသားများအရေးအကြားမှာ မတည်ငြိမ်လှတဲ့ သမိုင်းရာဇ၀င် နက်ရှိုင်းစွာရှိနေတာကိုတော့ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြန်လည်လှုပ်ရှားသက်ဝင်လာတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြီးကတော့ ရာစုနှစ်ဝက်နီးပါး အုပ်ချုပ်စိုးမိုးခဲ့တဲ့ ဗဟိုပါဝါထိန်းချုပ်ရေး စစ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ရဲ့ ရလဒ်တွေဆိုရင်လည်း မှန်ကန်နေတာပါပဲ။
အတိတ်က အကြောင်းတွေကို မေ့ချင်တာတွေလောက် ကွက်ကြားမေ့နေပြီး ဖြစ်သော်ငြားလည်း အစိုးရရဲ့ သံလက်သီးပေါ်လစီနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို အသုံးချပြီး စနစ်ချအုပ်ချုပ်နေမှုတွေကို အခုတော့ တော်တော်ကလေးသိလာရပါပြီ။ မြန်မာအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကို အခြေခံတဲ့ တဘက်မြင်အမျိုးသားရေးအမြင်ကို သံလှောင်အိမ်ထဲ သော့ခတ်ချိန်ပတ်ပြီး မာကျောတဲ့ ထိတ်ထိတ်ကြဲကြဲလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမျိုးကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ခံထားရတာမျိုးကလည်း ဂရုပြုဖွယ်ပါ။ မြန်မာဆိုဆိုက်တီတစ်ခုလုံးကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျဥ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးကြီးအမျိုးသားရေးဝါဒီများအဖြစ် ရှိနေကြဆဲပါ။
နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒအခြေခံအမျိုးသားရေးနဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပုံစံတွေ အပြန်အလှန်အင်အားဖြည့်တင်းနေမှုတွေ၊ လူထုအကြား ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာမှုတွေကတော့ နက်ရှိုင်းကျယ်ပြန့်နေတဲ့ ပြဿနာတွေပါပဲ။ အဲဒါတွေကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုပမာဏကို ကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်အကျွေးပြုနေတာပေါ့။ သူတို့က (လူထုတွေရဲ့) ဘိုးဘွားတွေအဆက်ဆက် ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတဲ့ အချက်တွေ၊ အမွေခံစွမ်းရည်တွေ၊ အဲဒါတွေက လူထုရဲ့ နှလုံးသားထဲကို ကြီးမားတဲ့ အမှားအယွင်းစည်းမျဥ်းတွေ မောင်း သွင်းနေတာတွေကို အပြည့်အ၀ကြီးသိရှိထားကြတာပေါ့။ မြန်မာတွေရဲ့ အင်အားကြီးနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်ကတော့ ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်မီက ကံကြွေးချစနစ်၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီတွေ၊ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ သွေးနားထင်ရောက်နေပြီး သွေးချင်ရောမှာကို ကြောက်ရွံ့နေမှုနဲ့ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကိုအခြေခံထားတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စတာတွေကို အအုပ်ချုပ်ခံတွေ အင်အားကျဆင်းရလေအောင် ရောသမမွှေထားတဲ့ခြင်းပါပဲ။ ဒါမျိုးက အင်အားပြင်းပြီး အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အစပ်အဟပ်ပါ။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးက လူထုကြီးကို လူမျိုးရေးနဲ့ သာသနာရေးကို အခြေခံတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကို အသုံးချပြီး သားကောင်အဖြစ် ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကာလတွေမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရှိ ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကာလမှာတော့ သူတို့ရဲ့ တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံးလာမှုကြောင့် ထောမနာပြုမှုတွေ လက်ခံရရှိနေလင့်ကစား ဒီလိုမျိုးအခြေအနေက ထပ်ပြီး ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ လှုံဆော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရာစုနှစ် တစ်စိတ်စာလောက်ကြာတဲ့အထိ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်လာမှုက ထင်ပေါ်တဲ့ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ်မှာ အမြစ်တွယ်လာတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ စစ်အစိုးရအတိုက်အခံတွေထဲက အကြည်ညိုခံ လူများစုကြီးမှာတောင် ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်လာမှုမျိုးမရှိသေးတာပါပဲ။ စစ်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ သူတို့ဘ၀တစ်ဝက်လောက် မြှုပ်နှံပစ်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ မန္တယားတွေရွတ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေ၊ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ရှိမနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကတော့ လူမျိုးရေးနဲ့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေမှာတော့ တစ်သံတည်းထွက်နေကြတော့တာပါပဲ။
ဒီလိုမျိုး လူမျိုးရေးအခြေခံ ဘာသာရေးစုဖွဲ့ပုံမျိုးက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှင်တွေနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို "သာသနာရေးအတွက် ခုခံပေးနေသူများ" ၊ "ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို ကာကွယ်နေသူများ" စတဲ့ ဂုဏ်ပုံတွေကို ခြုံပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြန်လည်တန်ဆာဆင်ယင်လိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးနေတာပဲလို့ ထေ့ထေ့ငေါ့ငေါ့ပြောစရာပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအမြင်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုကြီးက အနည်းဆုံးထင်မြင်ယူဆနေကြတာပါ။
လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးအစုအဖွဲ့ဝင် အရေခွံလဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက တချိန်ကတော့ စစ်ဆင်ရေးကြီးဆင်နွှဲသလိုပုံစံမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်အနှံ့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေကို ရာနဲ့ချီသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော သာသနိကအဆောက်အဦ တွေကို စီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါမျိုးတွေကို သူတို့က လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လောက်ကမှ ကျူးလွန်ထားခဲ့ကြတာပါ။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကတော့ ဘ၀တစ်သက်စာအတွက် ရန်သူကြီးတွေသာ ဆက်လက်ဖြစ်နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုရန်ဘက်များသဖွယ် ပြုလုပ်ထားမှုအတွက် စစ်ဘက်ကတော့ လူမျိုးရေး ဒါမှမဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ အစွန်းရောက် မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေး စတဲ့ အကျဉ်းသားစကားလုံးတွေကို သုံးပြီး (ပြည်သူ သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်လူတန်းစားကို) အဖြေထုတ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။
ဒီလိုမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းကြောင့် အခွင့်ထူးရရှိမှုတွေနဲ့ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေကတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာ ကိုယ်စားပြုမှုပမာဏက အနည်းအကျဉ်းလောက်ပဲရှိတာပါ။ အခြားသော ခေတ်မီတိုင်းနိုင်ငံတွေလို မြန်မာပြည်ကြီးက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်စုံ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစုဝေးထားတဲ့ အသိုက်အမြုံကြီးအဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ထောင်စုနှစ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။
မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ ကြီးကျယ်လှတဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကိုတော့ ခြေကုပ်ယူ အခြေချထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းလည်းရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတွင်းက အခြေကျပြီးဖြစ်နေတဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုသာသနာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်များအလျင်ကမှ ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်မီက ကံကျွေးချစနစ်မှာရှိခဲ့တဲ့ တရားရုံးတွေ၊ လယ်သမားအစည်းအရုံးတွေ၊ ကုန်သည် အဆင့်အတန်းတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆရာသမားတွေ၊ တတ်သိနားလည်သူတွေအားလုံးကလည်း ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံ၊ ကွဲပြားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုအမျိုးမျိုးကနေ ထွက်လာကြတာချည့်ပါပဲ။ သူတို့ထဲမှာ ပြည်တွင်းဖြစ်တွေပါသလို၊ နိုင်ငံခြားဖြစ်တွေလည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။
ဒါတွေက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲကမှ ယုံကြည်မှုကွဲပြားပြီး တိုင်းရင်းသားအဆက်အနွယ်အမျိုးမျိုးနောက်ခံရှိကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကို အပြည့်အ၀တန်ဖိုးထားကြတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိတဲ့ အစုအဝေးတွေပဲဖြစ်သလို ဒီအစုအဝေးတွေကိုပဲ မဟာအင်အားအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်းလက်ရှိကာလအခြေအနေမှာ နိုင်ငံတွင်းရော နိုင်ငံအပြင်မှာပါရှိနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေက အစွန်းရောက် လူမျိုးရေးအခြေခံ သံစဉ်တွေကို အခြေခံပြီး တိုင်းရင်းသားများအကြား စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့ စသဖြင့် သောက်ရေထဲကို အသက်ရှုကြပ်ပြီး ဆို့နစ်သွားအောင်လုပ်သမျိုး အသံထုတ်ကြွေးကြော်နေကြပါတယ်။
အံ့အားသင့်စရာတော့ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တိုးတက်မှုကို မလိုလားတဲ့ ဒါမျိုးအပြုအမူကို နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့ နေပြည်တော်က သမ္မတရုံးအတွင်းမှာပါ ခိုင်မြဲစွာ တွဲဆက်ထားလို့ပါပဲ။ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ရော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပါ ပြောဆိုနေကြတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလည်း မုန်းတီးခက်ထန်မှုက အညီအမျှရှိနေတာပါ။
အခုချိန်ကတော့ ခက်ခဲတဲ့အချိန်ပါ။ ခေတ်သစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ အဲဒါတွေအပေါ်မှာ အကောင်းမြင်မှုတွေက လျင်လျင်မြန်မြန်ကြီး ထွက်ပေါ်လာပေမယ့်လည်း လူမျိုးစုအရေး မီးလှိုင်းလုံးကြီးကတော့ တကယ့်ကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး နက်ရှိုင်းစွာတည်နေတဲ့ (ပြဿနာပါပဲ။) နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အင်အားပြင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ တိုင်းပြည်တွင်းက တံခါးပိတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ စနစ်ကျတဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒချိန်ညှိမှုတွေ စတာတွေက ထုတ်ပေးနေတဲ့ အသံက တနေ့ထက်တနေ့ ကျယ်လောင်လာနေပါတယ်။ ယနေ့တိုင်းပြည်က လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဦးတည်ချက်ကတော့ မသေချာမရေရာနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိတဲ့အနေအထားပါပဲ။
ဒီအချိန်ကတော့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် အသံထွက်ပြောဆိုကြရမယ့်အချိန်ပါ။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပုံစံအားလုံး၊ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးနဲ့ မြန်မာပြည်က လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားထုကို ဦးတည်ချက်ထားတဲ့ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် အနိုင်အထက်ပြုမှုတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုံ့ချရမယ်။ အဲလိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ပေါက်ရောက်မယ့် နည်းလမ်းအဖြေက အပြင်းအထန်လိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအဖြေကတော့ သင်ယူတတ်မြောက်မှုမရှိထားတဲ့ လူထုကို နိုင်ငံသားပညာရေးအခြေပြုစ တင်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေမှတဆင့် သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကို အလိုအလျောက်လက်သင့်ခံလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကဏ္ဍများနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအားလုံးနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးကြရပါမယ်။ ဒါတွေကနေ နိုင်ငံတွင်းမှာ ကြာမြင့်စွာရှိနေခဲ့တဲ့ လူမျိုးစုတစ်ခုတည်းက နိုင်ငံရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေးကို လွှမ်းမိုးထားတာမျိုးတွေပြိုကွဲသွားမယ်၊ ဒေသဆိုင်ရာအလိုက် အခွင့်အာဏာတွေရလာမယ်၊ လူထုအခြေပြုတဲ့ ဆိုရှယ်စီးပွားရေးတွေ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမယ်။
တခြားစကားလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးဆိုင်ရာ အသွင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ် ဆောင်ရွက်ချက်တွေအပြင် စစ်မှန်တဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပါ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်နိုင်ဖို့ရန် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး စံပြရွက်ဖျင်တဲကြီးတစ်ခု ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာလူထုကတော့ သမိုင်းကြောင်းအဆက်ဆက် ခံလာရတဲ့ ဖိနှိပ်မှု ထိခိုက်ဖျက်ဆီးခံရမှု စတာတွေထဲကနေ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။ မြန်မာလူထုကတော့ ရာစုနှစ်ဝက်လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ သံအိုးပုံစံ အာဏာရှင်စနစ်ထက်ပိုပြီး သက်ဆိုးရှည်ပါလိမ့်မယ်။ လူမျိုးကွဲနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမတူညီတာကြောင့် ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုပျက်ပြား သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီး ကြေက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေဖို့ မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံသားများအနေနဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိမှုတွေကိုသာလျှင် ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်သင့်တာပါ။ အဲဒီနိုင်ငံသားအသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးက ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကနေ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရအောင် ညှိယူမှုအခြေအနေတွေနဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ဒဏ်ချက်တွေကိုသာ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်သင့်တာပါ။ အားလုံးပါဝင်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးစုံလင်လှတဲ့ ဒီမိုကရေစီအသိုက်အ၀န်းကြီးဖြစ်ပြီး အဲဒီအသိုက်အ၀န်းကြီးထဲမှာ လူမျိုးစုံကွဲပြားနေတာက အင်အားကြီးတစ်ခုဖြစ်နေမယ်၊ အဲဒီအသိုက်အ၀န်းကြီးက ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်မယ်၊ ဒါမှသာလျှင် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်ခံနေ ရတဲ့ သံလှောင်အိမ်ကြီးထဲကနေ လွတ်မြောက်နိုင်တော့မှာပါ။
မြန်မာပြန် - လေးသက်တင်
စကားလုံးဖလှယ်မှုနှင့် နားလည်မှုအလွဲအမှားများသည် MMV နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘဲ ဘာသာပြန်သူ၏ အာဘော်နှင့် ယူဆသုံးသပ်ချက်များသာဖြစ်ကြောင်း။
Posted: 08 Sep 2012 09:28 AM PDT
The RM22 billion Mersing Laguna project which gained much publicity earlier this year, has been cancelled.
The Sultan of Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar said the project had been cancelled after the developer Radiant Starfish Development Berhad failed to raise the paid-up capital to RM200 million within six months as required under the agreement signed on Feb 25.
What happened? Malaysians were looking forward to the project, dubbed to be at par with the Gold Coast in Brisbane, when it was launched sometimes in March. I think the developer's representative has some explanations to do.
Here'sagood comment byareader called Bentayan:
"CEO Mersing Laguna, Ungku Safian kembali ke Rahmatullah pada pagi Jumaat 8.307Ogos 2012 kerana komplikasi hati dan telah menjalani rawatan tidak beberapa lama selepas majlis pelancaran Mersing Laguna. Pengumuman pembatalan projek dibuat pada hari yang sama. Keluarga dan syarikat pemaju tidak dapat berbuat apa-apa dalam keadaan yang menyedihkan ini.
Di harap semua komentar dapat memberi sedikit rasa hormat walaupun tidak bersetuju dan menganggap projek tersebut hanya angan-angan kosong.
Kebanyakan rakyat Malaysia tidak memahami keadaan ekonomi daerah Mersing yang ketinggalan jauh di belakang daerah-daerah lain di negeri johor. kami sebagai penduduk tempatan amat mengharapkan satu projek yang dapat memberi peluang pekerjaan dan menjana ekonomi mikro.
Sebelum ini tidak ada syarikat multinasional atau konglomerat yang berminat melabur atau mencadangkan projek seumpamanya di Mersing yang boleh memberi harapan kepada kami. Sekurang-kurangnya Radiant Starfish/Mersing Laguna mengeluarkan belanja yang besar untuk membuat kajian, membayar perunding, membuat EIA dan sebagainya sehinggalah beberlanja untuk mendapatkan persetujuan Kerajaan Negeri dan perkenan Sultan Johor.
Mengutuk dan menghina memang merupakan kegemaran rakyat Malaysia tanpa mengambil kira apa keperluan orang lain terutamanya kami di Mersing.
If any of you people with money and direct access to the istana of Johore, then you are welcome to develop Mersing with some `realistic' project. If you don't have it takes, then go fly kites."
Mersing Laguna involved the development of boutique hotels, service apartments and waterfront villas on 809ha of reclaimed land, touted to be the country's biggest land reclamation project.
Radiant Starfish had also signed agreements with four partners - Chinese construction conglomerate Sinohydro Corporation (M) Sdn Bhd, China-based theme park developers Shengrong International Group Co Ltd, Johor education foundation YPJ Holding Sdn Bhd and CIMB Insurance Brokers Sdn Bhd.
Under the agreement, the reclamation work to create 2,000 acres of land will be carried out by China's Sinohydro, one of the biggest dredging and reclamation companies in the world and has been involved with the construction of the Three Gorges Dam in China and the Bakun Dam in Sarawak.
Reclamation project involvesa36km stretch of the beach. The project was one of the nine announced by Prime Minister Datuk Seri Najib Razak to be implemented in the ECER region that straddles Pahang, Terengganu, Kelantan and Mersing in Johor on Feb 28.
I hope there isaway to salvage the project...
Posted: 08 Sep 2012 04:08 AM PDT
Pada waktu sama, konvoi juga akan berada di Ceramah Perdana Merdeka Rakyat di Food Court Pearl Park, Pekan Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. _KD
''Minggu lepas di Kelantan, kali ini di Melaka. Tindakan samseng makin berani dan biadap!'' tulis Anwar. -mk
Posted: 08 Sep 2012 02:09 AM PDT
SShah Alam - Pengacara terkenal TV3, Nurul Syuhada Nurul Ain Mohd Zin, 28, yang menjadi bahan kontroversi berkaitan dengan kenyataan mengenai Bintulu minggu lalu, semalam menjelaskan dia masih berkhidmat sebagai pengacara sambilan stesen televisyen itu.
Nurul Syuhada bersama rakan pengacara Fedtri Yahya dan Ally Iskandar. - Foto ihsan Twitter Nurul Syuhada
Permintaan maaf itu berbunyi, "to my fellow Malaysians brethren of Bintulu origin, to clarify, yesterday's (31 Ogos) statement of "daif" needs to be understood in the context that it was said i.e benefiting from the transformation programme. As an anak Jati Malaysia, I would never critisize my native soil or any of her great territories. To those who were offended, I apologise, to those who are attempting to sow hatred and fitnah, ALLAH almighty will be the judge of you."
"Bagi pihak TV3, kami ingin menerangkan bahawa terdapat salah tafsiran terhadap penyampaian oleh pengacara kami, Nurul Syuhada Nurul Ain Mohd Zin ketika merujuk kepada pemilihan Bintulu sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia tahun ini semasa siaran lintas langsung Perarakan Hari Kemerdekaan ke-55 pada Jumaat lepas.
Peminat, Atifa Arissa menulis, "kak..kenapa cakap Bintulu daif?"
Azimah Zainal pula menulis, "kecewa dengan kenyataan pengacara TV3, Nurul Syuhada yang mengatakan Bintulu itu daerah daif. Apa yang awak maksudkan saudari?"
Nurul Syuhada membalas dengan menulis, " Ya Allah dik, akak tersasul tadi. Things happen. Maafkan kekhilafan saya hanya manusia biasa."
Pengacara itu mengaku kesilapannya yang tidak disengajakan itu, " terima kasih atas teguran. Saya mengaku kesilapan saya yang tidak disengajakan. Things happen during live show." -SH
Have you ever heard of kinetic rain? Thanks to Angela who sent me the link to the video showing the world's largest kinetic art sculpture unveiled at Changi Airport in July. The write up is from the Youtube link.
CLICK HERE TO WATCH KINETIC RAIN!
Passengers and airport visitors entering the Departure Check-in Hall at Singapore Changi Airport's Terminal 1 (T1) can expect to stop in their tracks and be captivated byanew art installation. Kinetic Rain, as it is titled, takes pride of place at the terminal, enthralling visitors with its fluidity, distinctive shapes, elegant and refined movements and precision-perfect technology.
Kinetic Rain, installed as part of T1's recent refurbishment, is the icon of the revamped Departure Check-in Hall. This specially commissioned sculpture,afirst in an airport globally, comes asapair, each installed several meters apart from each other and visible from many areas of the Departure Check-in Hall.
Kinetic Rain is made up of 1,216 bronze droplets that transform elegantly into multiple shapes, akin to poetry in motion. Carrying an aviation theme, the key element in every shape shows the movement of flight through slow, fluid movements. Some of the more recognisable shapes include an aeroplane, hot air balloon andakite.
One can also make outadragon andaflock of birds amongst the 16 different programmed segments.
Each droplet is connected to motors installed in the ceiling of the Departure Check-in Hall. The motors containahigh precision rotary encoder which keeps track of the exact position of each droplet. A computer programme is used to control the movement of the droplets to form Kinetic Rain's unique shapes and patterns.
Kinetic Rain was created overaspan of 20 months. Artists, programmers and technologists were engaged to analyse the space available at T1 and conceptualiseamasterpiece that would be representative of the new terminal. The refurbished T1 is aptly themed 'Tropical City' in keeping with Singapore's garden city status and where rain, is very muchapart of the tropical climate.
Mr Yeo Kia Thye, Senior Vice President for Airport Operations, Changi Airport Group, said, "When we decided to upgrade Terminal 1 in 2008, we were mindful that people have fond memories of the terminal including the old Mylar Cords, the circular curtain of water that straddled three stories of the building. We wanted an art sculpture, which we found in Kinetic Rain, that was able to add the signature touch linking back to T1's illustrious past inanew and exciting way.
Posted: 07 Sep 2012 11:44 PM PDT
Kluang – Adalah sesuatu yang mengejutkan apabila Sinar Harian semalam mendedahkan wujud pasangan warga emas yang sudah 40 tahun mendiami rumah hanya menggunakan air perigi bagi mendapatkan bekalan air
Malangnya, perkara ini berlaku di sebuah negeri yang digelar 'maju' kalangan pimpinan UMNO-Barisan Nasional (BN) disifatkan hanya indah khbar dari rupa.
"Setiap hari, saya dan isteri akan menadah terlebih dahulu air perigi tersebut dan kemudian akan menyimpannya agar keladaknya yang berwarna kuning itu mendap ke bawah.
Setelah air itu jernih, baru kami gunakan," kata Atan lagi.
Selain itu, Atan menambah ada pihak yang menabur janjiuntuk memberikannya bantuan Projek Perumahan Rakyat
Termiskin (PPRT) bagaimanapun ia tidak kunjung-kunjung tiba. Malah, apa yang menimbulkan persoalan, sebarang urusan di agensi kerajaan yang diurus oleh pihak yang tidak mahu mengambil kesempatan hanya mampu diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat, namun apa yang berlaku adalah sebaliknya.
"Sudah lebih tiga tahun saya memohon untuk tinggal di rumah PPRT, namun janji hanya tinggal janji daripada mereka yang datang kononnya untuk membuat tinjauan tentang masalah yang saya hadapi di rumah ini.
"Sedangkan, segala urusan di JKM dan Baitulmal yang diuruskan oleh mereka yang tiada berkepentingan tidak mengambil masa lebih lima bulan untuk diselesaikan," katanya lagi.
"Setiap hari, saya dan isteri akan menadah terlebih dahulu air perigi tersebut dan kemudian akan menyimpannya agar keladaknya yang berwarna kuning itu mendap ke bawah. Setelah air itu jernih, baru kami gunakan.
"Kami sudah biasa dengan kehidupan seperti ini. Walaupun hidup serba kekurangan namun rumah kami mempunyai bekalan elektrik," katanya kepada Sinar Harian baru-baru ini.
"Sedangkan, segala urusan di JKM dan Baitulmal yang diuruskan oleh mereka yang tiada berkepentingan tidak mengambil masa lebih lima bulan untuk diselesaikan," katanya. -SH
Media pencacai menghebohkan Kelantan & Selangor menghadapi masalah air, sedangkan di negeri PM (Pahang) dan di negeri TPM (Johor) sendiri masalah air tak terurus.
Demikian hukum kebenaran dan keadilan mengambil tempatnya. Pendedahan ini membuktikan media pencacai sengaja memperbesarkan masalah air di negeri pakatan Rakyat sedangkan masalah air di negeri sendiri cuba diselindungi.
Posted: 07 Sep 2012 10:05 PM PDT
Life is to precious, do not destroy it.
Don't be too busy today........
-Written by Mother Theresa-
Posted: 07 Sep 2012 09:13 PM PDT
Segala momokan UMNO ini akhirnya disedari oleh orang bukan Melayu sebagai tektik kotor UMNO untuk menjauhkan orang Cina dari PAS. Kini semua lontaran negatif terhadap UMNO sudah tidak laku lagi.
'Klon' rosakkan rekod Twitter #55Merdeka Malaysia, kata firma penyelidikan
KUALA LUMPUR, 8 Sept — Malaysia mungkin sudah mencipta rekod dalam laman sosial Twitter minggu lalu jika 'klon' tidak digunakan untuk menutup angka sebenar tweet yang dihantar, kata firma penyelidikan sosial media bebas.
"Dengan andaian angka tersebut benar, tidak mustahil angka 3.6 juta tweet adalah rekod dunia," kata firma tersebut dalam laporan mereka.
"Akan tetapi, Twitter tidak membuat apa-apa pengumuman di laman blog mereka tentang #Merdeka 55.
"Tidak ada juga mana-mana laman web pengesanan yang menyebut tentang rekod #Merdeka55," tambah mereka lagi.
"Tanpa pengesahan daripada pihak ketiga, angka 3.6 juta tweet meragukan," kata Politweet.
Demikian hukum kebenaran dan keadilan berjalan. Tepat apa yang GB tulis dulu bahawa Isu Twitter: Najib Dilembukan Dan Cuba Pula Melembukan Dunia! Siapa yang melembukan Najib? Siapa lagi kalau bukan Menteri Penerangan & Multimedia serta seangkatan "budak-budak" IT di JPM. Baca link di bawah ini:
Posted: 07 Sep 2012 03:30 PM PDT
"That Mitt Romney, he isamaster campaigner. This week he was introducing his wife, and he said, 'She is the heavyweight champion of my life." Which may explain why on the ride home, he was strapped to the roof of the car." –Bill Maher
"As the Republicans continue checking underneath every available flag pin and Bible for viable candidates, presumed de facto frontrunner candidate Mitt Romney has gotta be thinking, 'What the fudge? This is starting to hurt where my feelings should be.'" –Jon Stewart